HALKAAN HOOSE KA AKHRISO :-WARARKA WARGEYSKA M.TIMES DAILY NEWS PAPER EE MAANTA OO AXAD 11-KA ABRIIL 2021-KA AH.
Sunday April 11, 2021 - 08:59:26 in Wararka by
XOG: SABABTA KEENTAY KALA-SHAKIGA DF IYO BEESHA CAALAMKA
Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa warqad shalay u dirtay Golaha Ammaanka ee QM uga digtay in faro-gelin lagu sameeyo doorashada dalka ee la isku mari la’yahay.
Qoraalka ayaa lagu yiri "Dowladda fe-deraalka Soomaal-iya waxa ay u arag-taa fargelin kasta oo dalal shisheeye, mid si toos ah loogu fara-gelinayo arrimaha gudaha dalka iyo ku tumasho qaraarada golaha ammaanka, heshiisyada iyo qawaaniinta dowliga ah.”
Arbacadii ayey aheyd markii dowladda federaalka ah ay sheegtay inuu fashilmay shirkii horudhaca ahaa ee Afisyooni uga socday dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada, iya-da oo eedda dusha ka saartay Puntland iyo Ju-baland.
Wararka ayaa sheegaya in todobaadkii hore uu jiray kulan dhex maray beesha caala-mka iyo xukuumadda federaalka ah kaasi uu hareeyey jawi is faham la’aan, kaasi oo la rume-ysan yahay inuu ka carreysiiyey dowladda
Kulankaas ayaa xubno ka tirsan dowla-dda waxay beesha caalamka weydiiyeen kaal-intooda, halka wakiilada beesha caalamka ku jawaabeen keliya in aanan mas’uuliyad ka saa-rneyn amniga hey’adaha dastuuriga ee ay sidoo kale mas’uuliyadoodu tahay in ilaaliyaan in aan dummin waxa dhisan, lana qabto cidda waxy-eeleeneysa.
Qoraalka loo diray golaha ammaanka waxaa ku xusan in amniga doorashada lagu wareejin doono xukuumadda, tilaabadan oo hal dhinac ah oo aan lagala tashan maamul gobol-eedyada oo dood ka qabo sida loo maareynayo amniga doorashada.
Lama oga sababta ay dowladda federa-alka u doonayso iney beesha caalamka faraha kala baxdo doorashada Soomaaliya, iyada oo leh maal-gelinta doorashada, sugidda amniga iyo bixinta qoondada miisaaniyadda dowladda 40%.
Waxaa shalay la filayay in madaxda do-wladda Federaalka iyo dowlad goboleedyada ay dib ugu laabtaan teendhada Afisyooni, balse sida ay Caasimada Online u sheegeen ilo-wa-reedyo, waxaa baaqday kulankaas.
Dowladda Federaalka ayaa dhawaan sheeg tay in wadahadalladii socday ay burbureen, halka labada madaxw-eyne ee Puntland iyo Jubaland ay beeniyeen warka ay dowladda faafisay. Saciid Cabdullaahi Deni iyo Axmed Madoobe ayaa ka dhawaajiyay ineysan ogeyn meel uu ku baaqday shirka, isla markaana ay diyaar u yahiin wakhti walba iney dib ugu laa-btaan teendhada Afisyooni.
Shalay ayaa la filayay iney madaxda dib ugu laabtaan teendhada Afisyooni islamarkaana ay sii wadaan wadahallada dhexdooda ah, kana arrinsadaan sidii la isugu imaan lahaa shir weyne looga heshiinayo hanaanka doorashoo yinka.
Si kastaba, dowladda oo markii hore beesha caalamka ka ogolaatay in kulan uu shalay dhaco ayaa lagu warramayaa inay xilli dambe sheegtay inaysan ka qeyb-gali karin, mana soo sheegin wax sabab ah oo ay sidaas u sameysay.
Baaqashada kulanka shalay ayaa imane ysa ayada oo dowladda ay shalay u dirtay Golaha Ammaanka QM digniin ku aadan inay faraha kala baxaan arrimaha doorashada Soo maaliya, taasi oo loo fasirtay inaysan dowladda diyaar u aheyn wada-hadal dambe.
Madaxweyne Farmaajo iyo xulafadiisa ayaa la rumeysan yahay inay mar hore go’aan ka ga areen ka qeybgalka shirkii ka socday Afisyooni, mana jirto ififaalo muujinayo in mar kale shir la isugu imaan karo.
DOWLADA OO SHEEGTAY IN AMNIGA DOORASHA DA UU LA WAREEGAYO RA’IISUL WASAARE ROOBLE
Qoraal ka soo baxay Wasaaradda Arri-maha Dibadda dowlada federalka oo loo direy Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa lagu sheegay in Ra’iisul Wasaaraha Xuk-uumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roo-ble lagu wareejinayo Amniga doorashooy-inka.oo
Wasaarada Arrimaha Dibadda oo qoraalkan ku sheegtay dhowr qodob ayaa qodobkiisa saddex-aad waxaa uu qornaa sidan;
"Cabashada ammaanka doorashada si loo xalliyo, dowladdu waxay xaqiijinaysaa in Guddiga Amniga Doorashada Qaranka uu hoggaankeeda qaban doonno Ra’iisul Wasaaraha, kaas oo la wareegi doona xalka arrimaha amniga.”
Midowga Musharixiinta ayaa waxa ay hore u sheegeen in amniga doorashada aan lagu aamini karin Madaxweyne Maxamed Cab-dullaahi Farmaajo iyagoo ku eedeeyay in ciid-amada uu siyaasad u adeegsaday, iyaga oo dalbaday in lagu wareejiyo Ra’iisul Wasaaraha.
Hase yeeshee qaar ka mid ah dala-byada Midowga Musharaxiinta iyo Maamulada Jubbaland iyo Puntland ee arrimaha dooras-hoyinka ayaanay weli dowladu aqbalin.
SHEEKH SHARIIF OO FARRIIN U DIRAY MADAXWE YNE GEELLE OO LA DOORTAY
Sheekh Shariif oo Qoraal soo saaray ayuu ugu hambalyeeyay Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo markii shanaad ku guuleystay doorasho ka dhacday dalkaas, isagoona helay Codad gaaraya 98.41% codadkii dadweynaha Jabuuti. Sidoo kale Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariifka ayaa Madaxweyne Geelle Alle uga baryay inuu la garab galo xilka culus ee shacabka Jabuuti u doorteen, isla markaana u rajeeyay horumar iyo barwaaqo.
"Waxaan hambalyo u dirayaa Madaxw-eynaha dalka Jabuuti walaalkeen Ismail Omar Guelleh oo markii shanaad loo doortay inuu sii hogaamiyo dalka aan walaalaha nahay ee Jab-uuti. Waxaan leeyahay Allaha kula garab galo xilka culus ee shacbiga Jabuuti ay kuu doort-een, waxaana u rajeynayaa guud ahaan Jabuuti horumar iyo barwaaqo” ayuu yiri Sheekh Shariif.
Madaxweyne Geelle, waxaa la tartamay ganacasade Zakariye Ismaaciil Faarax oo 57-jir ah, wuxuuna helay 1.59% tirada guud ee doo-rashadan. Zakariye oo ah shakhsi ku cusub siy-aasadda Jabuuti ayaa musharraxnimadiisa bar-aha bulshada ku shaaciyay bishii Janaayo ee sanadkan.
Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa shalay warqad ka koobneyd dhawr qodob ah u dirtay Golaha Ammaanka QM, waxeyna kaga digtay faragalin lagu sameeyo doorashada dalka. Warqadda ayaa waxaa sidoo kale lagu xusay in Ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble loogu wareeji-yay amniga doorashada dalka, inkasta oo aan faah-faahin laga bixin, ayada oo qodobkan uu ahaa mid ka mid ah arrimaha ay isku hayeen dowladda iyo dowlad gobolee-dyada.
Warqaddii ay dowladda dirtay ayaa siy-aabo kale duwan loo fahmay iyadoo dadka siyaasadda taxliiliya ay arrimo dhawr ah ku sif-eeyeen.
Xeel-dheerayaasha qaar ayaa ku macn-eeyey inay ka turjumeyso rabitaanka madaxwe-ynaha waqtigiisa dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ah inuu dalka ka qab-to doorasho aan loo dhameyn, oo aysan heshiis ku aheyn dhinacyada Siyaasadda, islamark-aana aysan jirin cid ka hadli karta.
Sidoo kale xubnaha beesha caalamka ee ku sugan Soomaaliya ayaa aad ula yaabay warqadii ka timid Villa Soomaaliya xilli ay suga-yeen iney teendhada kusoo celiyaan madaxda Soomaalida, balse warqadda dowladda ayaa loo fahmay inay xirtay wadahadal dambe oo lala galo Axmed Madoobe iyo Deni.
Axmed Madoobe iyo Saciid Deni waxaa miiska u saaran in laga wada hadlo awoodaha madaxweynaha wakhtiga ka dhamaaday, am-niga guud ee dalka iyo ka qeybgalka shirarka ee saamileyda siyaasadda.
Filashada laga qabo in Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho la isla ogol yahay ayaa sii yaraaneysa, waxaana muuqata in hogaamiya-yaasha Soomaalida uu qof walba ku dhagan yahay qodobadiisa.
Iyadoo ay taasi jirto ayey hadana bees-ha caalamka si weyn ugu cel-celisay ineysan ogolaan doonin doorasho hal dhinac ah, kuwa isbarbar socda iyo muddo kororsi intaba.
Waxaa muuqata in madaxda Soomaal-ida aysan wax tanaasul ah ka muuqan, taasna waxey dheereyn kartaa rajada laga qabo iney
dhacdo doorasho la wada ogol yahay.
MADAXWEYNE FARMAAJO OO DHAMBAAL HAMBAL YO AH U DIREY MADAXWEYNE ISMAACIIL CUMAR GEELLE
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Feder-aalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdu-llaahi Farmaajo ayaa hambalyo u diray madax-weynaha dalka aan walaalaha nahay ee Jamb-uuti ismaaciil Cumar Geelle oo markale dib loo doortay.
” aa guul xoojinaysa horumarka iyo xasill-oonida gobolka,Wax-aan ku kalsoonahay in aad dardargelin doonto horumarka iyo wax wada qabsiga dalalka gobolka” ayaa la-gu yiri warqoraal ah oo lagu dabacay twitter Maxadweynaha,” ayuu yiri madaxweyne Farm-aajo.
Madaxweyne Ismaacil Cumar Geelle ayaa markii shanaad loo doortay xilka madaxtinimo ee Dalka Jabuti,isagoo helay codad gaaraya boqolkiiba 98 ,sida lagu sheegay warar la shaaciyay shalay oo Sabti ah.
Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka ee waqtigeeda dhamaaday tan iyo markii la doortay qorshah-eeda koowaad inuu ahaa in la kala dhantaalo dowladdaha xubnaha ka ah federaalka damac-eeda dhabta ahna uu ahaa in la burburiyo ma-amulada jira.
Madaxweyne Deni ayaa sidoo kale ka hadlay arrimaha murugsan ee doorashada iyo shirarkii maalmihii lasoo dhaafay ugu socdayMuqdisho madaxda maamulada iyo madaxw-eynaha mudu xileedkiisa dhamaaday Mxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Saciid Cabdullaahi Deni ayaa faah-faahiyay laba qodob oo dowladda federaalka aysan jecleysan islamarkaana keentay sababta ay u shaacisay inuu fashilmay shirkaasi, laba-daasi sabab oo maamul ahaan u arkaan inay noqon doonaan daawo dhayeyso booggaha jira iyo shakiga ay qabaan.
labadaasi qodob ayuu ku sheegay in ay kala yihiin in dowladdu ay shar u aragtay in shi-rka looga hadlayo doorashada lagu casuumo madaxdii hore ee dalka gaar ahaan Shariif She-ekh Axmed iyo Xasan Sheekh iyo qodobka kale ee ah in beesha caalamka goob joog ka ahaado furitaanka shirka, waxaana raaca qodob kale oo qeexaya sugitaanka amniga doorashada maad-aama uu sheegay inaysan jirin kalsooni shaki badana uu jiro kadib dhacdadii 19-kii Febra-ayo."Qodobka ugu cuslaa ee dowladdu diiday waxay tahay in maalmaha furitaanka shirka lagu casuumo dad Soomaaliyeed oo saameyn ku leh dalka iyo dadka, inay madaxda Soomaaliyeed kala qeyb galaan shirka si ay bulshada Sooma-aliyeed ugu tebiyaan in doorashadaani tahay mid xalaal ah oo jawi fiican ku dhacda.
Si gaar ah waxay u diidanaayeen labadii madaxweyne Xasan Sheekh iyo Shariif Sheekh Axmed oo ka tirsan golaha murashaxiinta, in ay yimaadaan oo la dhageysto maadaama ay qa-baan tabasho iyo xadgudubyadii 19-kii Feb-raayo dowladdu kula kacday madaxdaasi, ima-atinkoodana wuxuu daawo u noqon lahaa in la dhageysto. Iyo qodobka kale oo ah in beesha caalamka oo Soomaalida ku dhex wareertay, oo dowladdu diiday inay kulamada kasoo qeybgal-aan, sababtana ma garan karo,” ayuu yiri Deni oo tilmaamay in beesha caalamka gacan weyn ku leeyihiin doorashada oo dhaqaale ay ku bixinayaan.
"Waayeel caanaha hortiisa ayaa lagu barxaa,” ayuu yiri Saciid Deni oo dalbaday in dowladdu ee waqtigeeda dhamaaday wax bad-an qarineyso, isagoo ku adkeystay in shirka uusan fashilmin, heshiis buuxa oo dadka Soom-aaliyeed iyo dalka maslaxadiisa ku jirta in lagu gaari doono.
"Waxaan rabaa inaan dadka Soomaa-liyeed u sheego in UN-ka iyo Midowga Africa ma ahan dal shisheeye, Soomaaliya xubin ayay ka tahay Qaramada Midoobay iyo AU marka caalamkaa ka tirsanahay, ma nihin dad caal-amka ka baxsan, shaqada ay gudanayaanna waa shaqadoodii ay annaga noo hayeen, laakin siyaasadda marar badan la alifaayo dadka lagu marin habaabinaayo laga dhigaayo in shisheeye gacanta nala soo galay, arrintaasi arrin jirta ma ahan dadkana in lagu marin habaabiyo ma ah-an, dad faquuqan ama bulsho meel gaar ah de-gan ma nihin, shalayna anagaa ugu fakhri ba-dan caalamka,” ayuu yiri Saciid Deni.
Saciid Deni ayaa beeniyay in magaal-ada Muqdisho uu ku joogo culeys iyo amar beesha caalamka saartay inuusan bixi karin ilaa heshiis ay gaaraan madaxda Soomaalida.
"Anigaa Muqdisho imid, waxaana u imid danta ummadda Soomaaliyeed, waana u jog-ayaa ilaa ay ka dhamaaneyso, cid i fartayna ma jirto, cid aan ugu tegaayo danta iyo shaqada aan leeyahay ma jirto meelnana uma socdo, markeey ii dhamaatana meeshii aan shaqada ka lahaa iyo xafiiskeyga ayaa ku noqonayaa,” ayuu yiri Saciid Deni.
Madaxweyne Deni ayaa carabka ku ad-keeyay in aysan jirin cid gaar ah oo is hayso balse laga wada hadlaayo danta qaranka oo aysan jirin cid gaar ah oo danta qaranka leh, ujeedadiisana ay tahay "Sidee dalka Soomaa-liyeed jiho loogu yeelaa aan hadhow hurgumo iyo is-qabqabsi ka imaan nidaamkii lagu hes-hiiyayna weesac ay ku jirto.”
NATIIJADA BAARITAANKA DILKII GUDDOOMIY IHII DEGMADA HODAN OO LOO GUDBIYAY XEER ILAALINTA MAXKAMADDA CIIDAMADA
Guddigii xukuumaddu xilgarsiinta u saa-rtay baaritaanka dilkii guddoomiyihii degmada Hodan ee gobolka Banaadir Cabdixakiin Dheg-ajuun oo Shalay galka Baa-rista kiiskaas ku wareejiyey xafiiska Xeer ilaalinta Max-kamadda Ciidamada Qala-bka sida. Guddoomiye kux-igeenka dhinaca Amniga & Siyaasadda Gobolka Banaadir Cali Cabdi Warsheere oo kamid ah Ehellada Guddoomiyihii degmada Hodan ayaa sheegay in baaritaanka dhacdada lagu dilay Guddoomiyihii degmada Hodan ay bilaabeen 28-kii Bishii Janaayo ee sanadkaan, isla markaana natiijadii soo baxday ay u gudbiyeen xafiiska Xeer ilaalinta Maxka-madda Ciidamada.
Waxaa uu hadalkiiss uu intaasi ku daray in dhacdadii lagu dilay Guddoomiyihii degmada Hodan aysan aheyn mid la qaadan karo ka maamul ahaana ay daba socon doonaan ilaa uu cadaalad ka helo.
Dhinaca kale Wasiirka Amniga Xukuum-adda xilgaarsiinta Xasan Xundubeey Jimcaale aya sheegay in muddo laba Bilood ah ay ku qaadatay baaritaanka dilkii Guddoomiyihii deg-mada Hodan, kaas oo uu sheegay in meel wan-agsan ay soo gaartay.
Waxaa uu sheegay Wasiirka in Hay’ad-aha garsoorka dalka ay Shaqadooda qabsan doonaan ayna bilabi doonaan qadiska dacwa-dda Kiiska uuna rajeeynayo inay Cadaalad heli doonaan Qoyska guddoomiyihii degmada Ho-dan ee gobolka Banaadir Cabdixakiin Dheg-ajuun.
DOWLADDO DIB U DEJIN U SAMEYNAYA QAXOOT IGA LAGA XIRAYO XERYAHA DHADHAAB & KAAKUMA
Hay’adda UNHCR oggolaatay in ilaa 100,000 oo Qaxooti ku nool Dhadhaab iyo Kaakumo dib loo dejiyo dalal kale, sida Maraykanka, Canada, Ethiopia iyo South Sudan.Qorshaha UNHCR waxaa lagu qeexay in 5,000 oo Qaxooti si gaar ah Dib-u-dejin loogu samayn doono dalka Maraykanka.
UNHCR waxaa kaloo u qorsheysan Fulinta Dib-u-rarka Qaxootiga:-
1- In 10,000 oo Qaxooti dib loo dejiyo dalka Somalia,
2- In 5,000 dib loo dejiyo Ethiopia,
3- In 5,000 oo Qaxooti dib loo dejiyo South Sudan,
4- In 3,500 Qaxooti dib loo djeiyo ama loo raro dalka Burundi dabayaaqada sanadkan 2021-ka.
5- In 2,500 Qaxooti Sharciga Degananshaha (Residency Status) ka heli doonaan dalalka ku bahoobay Urur-gobaleedka Bulshada Bariga Afrika ee The East African Community ee EAC, kuwaasi oo kala ah: Uganda, Tanzania. Bur undi, Kenya, Rwanda iyo South Sudan.
Haddaba, Warbixinta UNHCR baahisay oo lagu daabacay Warbaahino Kenyan ah iyo kuwo C aalami ah ayaa waxa uu Wargeyska The Star ee ka soo baxa Nairobi si faahfaahsan u qoray Dulucda Hadalka Qoraalka ee ka soo baxay Ma daxa Xafiiska UNHCR ee Kenya, Fathiaa Abdalla.
MASAR OO SHURUUD KU XIRTAY TURKIGA & INAY CIIDDANKOODA KALA BAXAAN DALALKA CARABTA
Dowladda Masar ayaa waxay shuruudo adag hor-dhigtay Dowladda Turkiga, si ay labada dal u bilaabaan wada-xaajoodyada lagu xalinayo Farqiga asaaska u ah Khilaafkooda Diplomaasiyadeed.
Dowladda Masar ayaa la sheegay inay hakisay Wada-xaajoodyada lagu caadiyeynayo Xiriirka Turkiga ilaa Fahfaahin dheerad kadib.
Kulan u qorsheysnaa inay Saraakiil ka kala socda labada dal kuyeeshaan magaalladd Qaahira dhamaadka bishan April ayey Dowladda Masar laashay, sida ay shegeeen Ilo-wareedyo Fiidnimadii habeen hore oo Jimco ahayd la hadlay Telefishinka Al Arabiya TV ee Sacuudiga laga leeyahay, balse ay Xarumihiisa Dhexe ku yaallaan magaalladda Dubai ee dalka Imaaraadka.
Ilo-wareedyada waxay intaasi ku dareen inay Masar hakisay wax kasta oo Wada-hadalo lagu hagaajinayo Xiriirka labada dal, tan iyo inta ay Turkiga ay Ciiddanka Calooshood-U-Shaqeystayaasha ah ka soo saarayso dalka Libiya.
Shuruuddaha ugu adag ee ay Dowladda Masar ku xirtay caadiyeynta Xiriirkooda waxaa ka mid ah:
1- inay Dowladda Turkiga sida ugu dhaqsaha badan u fuliyaan Codsiyada Masar, oo ay ka mid yihiin in Tallaabo laga qaado Kanaalladda ay Ururka Akhwaanu-Muslimiinka ama (Muslim Brothershood) ee laga mamnuucay Masar ku leeyihiin gudaha Turkiga.
2- Ilo-wareedyada waxay kaloo tilmaamayaan inay Dowladda Turkiga codsatay in waqti dheerad ah la siiyo sidii ay La-taliyayaashooda Ciiddanka iyo Xubnooda looga soo daad-gureyn lahaa dalka Libiya.
3- Isla Ilo-wareedyada ayaa muujiyey inay Dowladda Turkiga hakisay dhaqdhaqaaqyada tiro ka mid ah Ururka Akhwaanul-Muslimiinka, balse Dowladda Masar ayaa codsatay Tallaabooyin joogto ah iyo in loo soo gacan-geliyo Yaxye Muusa iyo Calaa Al-Samaaxi, balse, Turkiga waxay codsatay in arrintasi diyaar u ahayn oo hoos loo dhigo.
4- Dowladda Masar waxay kaloo sheegtay sida ay daruuriga u tahay in Ciiddamada Turkiga laga wada daad-gureeyo dalalka Carbeed ee ay ku sugan yihiin iyo Ixtiraamka Madax-bannaanida dalalka Carbeed.
Turkiga waxay Ciiddamo iyo Saldhigyo Milliteri ku leeyihiin Somalia, Qatar iyo Libiya.
Dhinaca kale, Ilo-wareedyada la hadlay Telefishinka Al-Arabiya TV waxay kaloo sheegeen inay Turkiga ballan qaadeen inay Tallaabooyin dheeraad ah ka qadi doonaan Janalada Telefishinadda Ururka Akhwaanul Muslimiinka ka hor curashada bisha barakaysan ee Ramadaan, balse, Dowladda Masar waxay Turkiga ku wargelisay in loo baahan yahay in la dedejiyo Tallaabooyinkaasi.
Wasiiru dowlaha Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga, ee Xukuumadda xilgaarsiinta Balal Maxamed Cusmaan, ayaa shalay oo Sabti ah kaga guddoomay xafiiskiisa Wasaaradda ee Caasimadda Muqdisho waraaqaha aqoonsiga wakiilka cusub ee UNICEF ee Soomaaliya, Dr. Mohamed Ayoya.
Mudane Balal Cusmaan ayaa u caddeeyay sida uu diyaar ugu yahay fududeynta howlaha UNICEF ay ka fulinayso dhammaan gobollada Soomaaliya iyadoo loo marayo hey’adaha kala duwan ee dowladda.
Dhankiisa, Wakiilka cusub ee UNICEF ayaa carabaabay sida uu ugu faraxsanyahay inuu wakiil uga noqday hey’addiisa Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, isagoo carabka ku adkeeyay inuu dadaal ku bixin doono xoojinta wadashaqaynta iyo howlaha isku duwidda ee kala dhexeysa xukuumadda federaalka si wax looga qabto xaaladaha bini’aadanimo,loona hirgeliyo barnaamijyada adeegga bulshada ee ku suntan dhallaanka, hooyada, waxbarashada iyo caafimaadka.
WASIIRADA ARRIMAHA DIBADDA DALAL IS-KHILA AFSAN OO WADA HADLAY
Ilo-wareedyo Diplomasiyadeed ayaa sheegay inay Wasiirada Arrimaha Dibedda ee dalalka Turkiga iyo Masar ay shalay ku wada hadleen Khadka Telefoonka.
Labada Wasiir (Mevlut Cavusoglu iyo Samiix Shukri) waxay is-dhaafsadeen Salaanta Hambalyada ee Bisha Barakaysan ee Ramadaan oo bilan doonto dhowr maalmood kadib.
Wada-hadalkooda ayaa ku soo beegmay, iyadoo uu dhicisoobay dadaal lagu doonayey in dib loogu soo celiyo Xiriirka Labada Waddan, kadib, Khilaaf Diplomaasiyadeed oo soo kala dhex galay.
Kulan la filayey in Guddiyo ka kala socda Masar iyo Turkiga bishan dhamaadkeeda ku yeeshaan Qaahira ayaa la baajiyey, iyadoo ay Dowladda Masar soo bandhigtay shuruudo badan oo ay ku xirtay Dib-u-soo-celinta Xiriirka labada dal.
Qoddobada ay Dowladaha Masar iyo Turkiga ku kala tagsan yihiin waxaa ugu tuhunka weyn Faragelinta Turkiga ee dalka Libiya iyo Marti-gelinta Turkiga ee Madaxda Ururka Akhwaanul-Muslimiinka ee laga mamuucay Masar.
Shuruudaha Masar waxaa kaloo ka mid ah inay Turkiga Ciiddankooda kala soo baxaan dalalka Carabta iyo Ixtiraamka Madax-bannaanida dalalka Carbeed.
Wasaarada Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada ayaa sheegtay in Isbitaalka martiini ee magaalada Muqdisho dib u bilaabi doono howlihii caadiga ahaa ee bulshada u haayay .
Isbitaalka oo Sanad ka hor markii uu dalka yimid xanuunka Corona Virus dowladda ay sheegtay in ay loo gaaryeelay Isbitaalka dadka uu soo rito xanuunka Corona Virus .
Qoraal lagu daabacay barta Facebook-ga ee Wasaaradda Caafimaadka ayaa lagu sheegay maadama uu yaraaday xanuunka Covid-19 in Isbitaalka loo fasaxayo in uu qabto howlaha kale ee Caafimaadka.
"Isbitaalka Guud Ee Demartino wuxuu bulshada la socodsiinayaa in uu isbitaalka dib u bilaabay shaqadiisa caadiga eheed maadaama ay hoos u dheceen xaaladaha COVID19 ee Gobolka Banaadir.”
"Wuxuu isbitaalka qaabili doonaa bukaanada cudurrda guud , Cadurrada Caruurta , dhalmada iyo cudurrada haweenka iyo Qaliimada guud.”
"Sidoo kale isbitaalka wuxuu sii wadayaa u a deegidda bukaanada u soo rito caabuqa COVID19 iyadoo loo asteeyo meel gaar ah.” ayaa lagu yir Qoraal lagu daabacay barta
Wasiirka Wasaaradda Gaashaandhigga Xukuumadda xilgarsiinta ee Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji ayaa Shalay waxaa uu kulan la qaatay Saraakiil ka tirsan Taliska Ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya .
Saraakiisha ka socotay Ciidamada Mareykanka ayaa waxaa ay balan qadeen kordhinta tabab-
arka Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo Qalabeyntooda si ay u dardar geliyaan dagaalka ay kula jran Al-Shabaab.
. Wasiirka Wasaaradda Gaashaandhigga aya uga mahad celiyay dowladda Mareykanka kaalinta ay ka qaadanayaan howlgalka amni ee ka socda Soomaaliya & tababarka ay siiyaan Ciidamada Kumaandoosta Soomaaliya ee DAN
SOMALILAND OO KA HADASHAY DIB U DOOR ASHADII MADAXWEYNAHA JABUUTI
Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi, isagoo ku hadlaya magaciisa, ka Somaliland iyo ka shacbi weynaha, waxa uu dhambaal hambalyo ah u dira yaa shacbiga iyo dawladda Jabuuti, guushii ay ka gaareen doorashadii sida nabadgelyada aha yd uga qabsoontay dalk
aasi jimcihii oo ay taariikhdu ahayd 09-04-2021, isagoo si gaara hambalyadaasi ugu diray Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti, Mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo mar kale loo doortay hoggaaminta madaxtinimo ee dalkaasi.
Madaxweynaha Somaliland waxa uu ku bogaadiyey Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti horumarka ay Jabuuti ku tallaabsatay mudadii uu hoggaaminayay. labada shacbi ee Somaliland iyo Jabuuti oo xiriir qoto dheeri oo soo jireen ahi ka dhaxeeyo, waxa uu madaxw eynuhu u rajaynayaa inuu noqdo xiriir miro dhal ah oo sii xoogaysta.
Ugu danbayn madaxweynuhu waxa uu mar labaad ugu hambalyeynayaa madaxweynaa Jamhuuriyadda Jabuuti guusha taariikhiga ah ee uu ka soo hooyay doorashadii dalkaasi ka qabsoontay, isagoo u rajeeyey Madaxweynaha, dawladda iyo Shacabka reer Jabuuti in ay ku waaran barwaaqo, nabadgelyo iyo horumar.
TALISKA BOOLISKA OO SHAACIYAY KHASAAR AHA KA DHASHAY QARAXII MAGAALADA BAYDHABO
Taliska Ciidanka Booliska dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa ka hadlay Qarax Is-miidaamin ah oo barqanimadii Shalay ka dhacay Magaalada Baydhabo ee Caasimadda KMG ah ee Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Qoraal uu soo saaray Afhayeenka Ciidanka Booliska Sadiiq Aadan Doodishe ayaa waxaa uu ku sheegay in qaraxa uu fuliyay qof isku soo xiray Jaakad waxyaabaha qarxa ah, uuna isku qarxiyay Maqaayad shaaxa laga cabo oo ku taalla Baydhabo.
Khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay qaraxaas dhacay, isla markaana waxaa lala eegtay Guddoomiyaha Gobolka Baay Cali Wardheere Cabdiraxmaan oo fadhiyay Maqaayada iyo dad kale oo shacab ah.
Afhayeen Sadiiq Aadan ayaa waxaa uu shaaciyay in ugu yaraan qaraxa ay ku dhinteen laba qof oo shacab ah, halka 5 qof kalena ay ku dhaawacmeen, kuwaasi oo la geeyay Xarumo Caafimaad, uuna ka badbaaday Guddoomiye Cali Wardheere.
Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska Maamulka Koonfur Galbeed ayaa tegay aaga uu qaraxu ka dhacay, isla markaana xiray halkaas, iyagoona sameeyay baaritaano ku aadan qaraxaas oo sidoo kale geystay burbur hantiyadeed.
Si kastaba Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay ayaa waxaa horey uga dhacaya qaraxyo Is-miidaamin ah, waxaana inta badan Mas’uuliyada qaraxyadaas dhacay sheegtay dagaalamayaasha Al-shabaab.
Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada 3-aad qeybta 27-aad Xoogga Dalka ayaa howlgal Amniga lagu xaaqiijinayay waxaa ay Shalay ka sameeyeen wadada u dhaxeysa degmada Balcad iyo Tuulada Qalimoow ee Gobolka Shabeellaha Dhexe.
Saraakiisha holwgalka hoggamineysay ayaa ujeedkooda waxaa ay ku sheegeen in uu ahaa inay ka hortagaan miinooyinka ay wadada ku aasaan Ururka Al-Shabaab oo dhowr jeer ay ku waxyeeloobeen Askar iyo mas’uuliyiin.
Taliyaha guuto 3-aad qeybta 27-aad Gaashaanle Sare Abshir Maxamud Maxamad Shataqeey ayaa sheegay in Ciidamada xooga ay qarxiyeen 5 Miino oo Al-Shabaab ku aaseen wadada xiriirisa degmada Balcad & Tuulada Qalimoow ee G/Shabeellaha Dhexe.
Sidoo kale Taliyaha oo la hadlay Idaacadda Codka Ciidamada Qalabka sida inay howlgalka sii wadi doonaan ilaa ay ka nadiifinayaan miinooyinka Al-Shabaab ku Aaseen Wadadaas.
Wadada xiriirisa degmada Balcad & Tuulada Qalimoow ee G/Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa dhowr jeer ka dhacay qaarxyo iyo weeraro toos ah oo ay ku waxyeeloobeen Saraakiil & Askar ka tirsan Dowladda Sooma
aliya & mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka Hir-Shabeelle.
M/CADAADO OO SHALAY LAGA TUKADAY SALAAD ROOB-DOON AH
Dadka reer cadaado ayaa shalay iskugu soo baxay salaad Alle looga baryaayo in kuleylka uu uga qaado roobna uu siiyo.
Sedex maalin kahor ayay ahayd markii maamulka degmada Cadaado uu shaaciyay in shalay la tukanayto salaadda roob-doon ah oo hal meel lagu wada dukado.
Culumaa’udiinka, qeybaha kala duwan ee bulshada, ayaa si isku mid ah uga soo qeyb galay dukashada saladaan roob-doonka ah, iyadoo dadka qaarkood ay soomanayen sedexdii maalin ee lasoo dhaafay.
Shiikh Maxamed Khani oo kamid ah Culimada magaalada Cadaado, ayaa dadka ku waaniyay in ay Alle u toobad keenaan iskuna samraan.
Guddoomiyaha degmada Cadaado Cabdullaah Cabdiraxmaan Tootole, ayaa ugu dambeyn dadka deegaanka ugu baaqay inay ka fogadaan waxyabaha maanka dooriya iyo falalka anshax darada ah, Xilli qeybo ka mid ah dalka ay ka jiraan abaaro.Gobalada dalka qaar ayaa waxaa ka taagan abaaro ay kaga horeyeen, xaalufin Ayax iyo colaado ay ku hayaan Maleeshida Al-shabaab.
MAXAY TAHAY SABABTA RAII’SUL WASAARAHA UK UGA QEYB-GALEYN AASKA AMIIR PHILIP?
"si inta suurtagalka ah ay xubno badan oo qoyska ka mid ah uga qeyb galaan xilli ay jiraan xannibaadaha feyriska Corona ” ayaa lagu yiri war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska rai’sul wasaaraha.